Mpanangom-bokatra momba ny jono: takina ny famerenana isam-bolana ny “fiche verte” | NewsMada
Mpanangom-bokatra momba ny jono: takina ny famerenana isam-bolana ny “fiche verte”
Par Taratra sur 27/12/2019
Nisokatra ny 16 desambra teo ny taom-panjonoana vaovao ary mifarana amin’ny 31 marsa 2020 ny fangatahan-dalana fahazoana manangom-bokatra. Betsaka ny fanavaozana hoentin’ny minisiteran’ny Fambolena sy fiompiana ary ny jono.
Maherin’ny 1500 ireo mpanangom-bokatra avy amin’ny fanjonoana. Io ny tarehimarika tsara indrindra hatramin’ny taona maro, nefa ihany koa fanararaotan’ny sasany amin’ny tsy fanarahan-dalàna. Nanamafy ny tale jeneralin’ny jono sy ny fiompiana anaty rano, i Bemanaja Etienne, hitondrana fanavaozana betsaka ny fanangonam-bokatra, tsy maintsy arahin’ny rehetra.
Nohamafisina ny fanajana ny vanim-potoana fanavaozana fanangonam-bokatra, tsy misy intsony aorian’ny 31 marsa 2020 ny fifampiraharahana, raha tsorina ny kolikoly hahazoan’ny sasany fahazoan-dalana manangom-bokatra. Notsiahivin’ny tale jeneralin’ny jono, ny fepetra takina amin’ireo mpanangom-bokatra, ny tsy maintsy hamerenana isam-bolana ny “fiche verte” mirakitra ny antontanisa amin’ny asa ataon’izy ireo.
Avy amin’izany “fiche verte” izany ny hahafantarana ireo karazam-bokatra sy ny lanjany voangona, hanaraha-maso ny asan’ireo mpandraharaha ireo sy ny haba takina mifanaraka amin’izany. Ny fahafantarana antontanisa koa, handraisana fepetra ho fiarovana ireo harena anaty rano. Teo aloha, tsy mamparisika ny mpanangom-bokatra maro ny mamerina io “fiche verte” io, tsy hamantarana ny vokatra azo, na ny tsena handefasana izany.
“Raha tsy voahaja izay fepetra famerenana ny “fiche verte” isam-bolana izay, tsy hahazo alalana amin’ny fanavaozana fanangonam-bokatra intsony amin’ny taona manaraka izay manao izany”, hoy ny tale jeneralin’ny jono. Fanatsarana ny fitantanana ny tanjon’ny minisitera miandraikitra ny jono, ka sarotiny, araka ny nambaran’ny tale jeneraly ihany Mazava ny lalàna momba izany, anarivony ireo mpandraharaha amin’io sehatra io, tsy Malagasy ihany fa ahitana vahiny betsaka …